စိတ်ကျခြင်းဆိုတာဘာလဲ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ယင်းအတွက် ကုသပေးသူကောင်းကောင်းတစ်ယောက် ဘယ်လိုရှာမလဲ – Shwehealth.com
စိတ်ကျခြင်းဆိုတာဘာလဲ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ယင်းအတွက် ကုသပေးသူကောင်းကောင်းတစ်ယောက် ဘယ်လိုရှာမလဲ
1. ဇူလိုငျ 2016 23. မေ 2016
စိတ်ကျခြင်းဆိုသည်မှာ စိတ်ဓာတ်အင်အားကျဆင်းနေခြင်း အခြေအနေနှင့် လူတစ်ယောက်၏ အတွေးများ၊ လုပ်ပုံကိုင်ပုံ၊ ခံစားချက်များနှင့် နေထိုင်၍ ကောင်းခြင်း စသည်တို့အပေါ် သက်ရောက် နိုင်သည့် လုပ်ဆောင်ချက်ကို ငြင်းပယ်ခြင်းဖြစ်သည်။ အဖြစ်များသော လက္ခဏာများမှာ ၀မ်းနည်းခြင်း၊ စိတ်လှုပ်ရှားခြင်း၊ မျှော်လင့်ချက်မဲ့ခြင်း၊ အကူအညီမဲ့ခြင်း၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကို တန်ဖိုးမထားခြင်း၊ အပြစ်ရှိ သည်ဟု ခံစားနေရခြင်း၊ မတည်ငြိမ်ခြင်း၊ ရှက်ရွံ့ခြင်းနှင့် ဂနာမငြိမ်ခြင်းတို့ ဖြစ်ကြသည်။
စိတ်ကျခြင်းသည် အဓိကစိတ်ကျခြင်း အခြေအနေကဲ့သို့သော စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ရောဂါစုအချို့ ၏ လက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင် ယင်းသည် ပုံမှန်ဘ၀တစ်ခု၏ အစိတ်အပိုင်းများဖြစ်ကြသော ချစ်ခင်ရသူတစ်ယောက် သေဆုံးခြင်း၊ ခန္ဓာကိုယ် နာမကျန်းဖြစ်ခြင်း သို့မဟုတ် ဆေးအချို့ သို့မဟုတ် ဆေးကုသမှုအချို့အပေါ် ပုံမှန်တုံ့ပြန်မှုလည်း ဖြစ်နိုင်သည်။
အခြားလက္ခဏာများဖြစ်ကြသည့် မနက်စောစော နိုးနေတတ်ခြင်း၊ အစားအသောက်ပျက်ခြင်း၊ ကိုယ်အ လေးချိန်လျော့ခြင်းနှင့် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်အခြားဝါသနာပါရာများတွင် စိတ်ဝင်စားမှုလျော့ နည်းခြင်း စသည်တို့မှာ အခြားသော ရောဂါအတော်များများတွင်လည်း တွေ့ရှိရတတ်သောကြောင့် စိတ်ကျခြင်းကို စစ်ဆေးဖော်ထုတ်ရာတွင် အသုံးဝင်ခြင်း မရှိလှပေ။
ကျန်လက္ခဏာများဖြစ်ကြသော ပျော်ရွှင်ချိန်ဟူ၍ လုံးဝမရှိဘဲ အစဉ်အမြဲ စိတ်ဓာတ်အင်အား ကျဆင်းနေခြင်း၊ ပျော်ရွှင်ကျေနပ်မှုကို ခံစားရာတွင် ယုံကြည်မှုမရှိတော့ခြင်းနှင့် အစဉ်အမြဲ ကိုယ့်ကိုယ် ကို အပြစ်တင်ခြင်း စသည်တို့က စစ်ဆေးဖော်ထုတ်ရာတွင် ပို၍ အသုံးဝင်သည်။
စိတ်ကျခြင်းကို ဖြစ်စေသော အကြောင်းများ
စိတ်ကျခြင်းကို ဖြစ်စေသော အကြောင်းများစွာရှိသည်။ ကလေးဘ၀တွင် ဖြစ်စေသောအ ကြောင်းများမှာ သေဆုံးခြင်း၊ လစ်လျူရှုခံရခြင်း၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ မတရားပြုခံရခြင်း၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ မတရားပြုခံရခြင်း၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ မတရားပြုခံရခြင်းနှင့် မွေးချင်းများအကြား မိဘများ၏ ခွဲခြားဆက် ဆံမှုကို ခံရခြင်းတို့ဖြစ်ကြသည်။ လူကြီးပိုင်းတွင် ဖြစ်စေသော အကြောင်းများမှာ ကလေးမွေးဖွားခြင်း၊ သွေးဆုံးခြင်း၊ ငွေကြေးအခက်အခဲဖြစ်ခြင်း၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာများ၊ စိတ်ဖိစီးမှု များစေသော ရောဂါများ ဖြစ်ရခြင်း (ဥပမာ ကင်ဆာ၊ HIV)၊ အနိုင်ကျင့်ခံရခြင်း၊ ချစ်ခင်သူများကို ဆုံးရှုံး ရခြင်းနှင့် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များ စသည်တို့ ဖြစ်ကြသည်။
စိတ်ကျခြင်းအတွက် အဓိက ကုသမှုမှာ အားပေးထောက်ပံ့သော ကုသမှုသာဖြစ်သင့်သည်။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးနှင့် ရလဒ်မမျှတာမှုကြောင့် အနုစား စိတ်ကျခြင်း၏ ရှေးဦးကုသမှုအတွက် စိတ်ဖိစီး မှုဆန့်ကျင်ဆေးများကို မသုံးစွဲသင့်ပေ။ လူနာဖြစ်သူ၏ စိတ်ဓာတ်ကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်သော၊ မိမိကိုယ် ကိုယုံကြည်မှုရှိစေသော လုပ်ဆောင်မှုများ၊ အားပေးခြင်း၊ စိတ်ဓာတ်တက်ကြွစေခြင်း၊ ချီးကျူးခြင်း၊ မိသားစု၊ အပေါင်းအသင်းများနှင့် လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့် ထိတွေ့စေခြင်း စသည်တို့ကို ပြုလုပ်ပေး ခြင်းက ပို၍ အကျိုးရှိစေနိုင်သည်။ ဖြစ်နိုင်ပါက လူနာတစ်ဦးချင်းစီအတွက် စိတ်ကျခြင်းကို ဖြစ်စေ သော အကြောင်းရင်းကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်၍ ကုသပေးသင့်သည်။
ကျွမ်းကျင်သူများ၏ အဆိုအရ မြန်မာနိုင်ငံတွင် စိတ်ကျခြင်းကဲ့သို့သော စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျန်း မာရေးပြဿနာများ ဖြစ်ပွားမှုမှာ လူနေမှုစနစ်အပြောင်းအလဲများကြောင့် ပိုမို၍ ဖြစ်ပေါ်လာနေသည် ဟု သိရသည်။ လူတစ်ယောက်အနေဖြင့် သူ၏ လိုအင်ဆန္ဒများနှင့် မျှော်လင့်ချက်များသည် လက်တွေ့ ဘ၀နှင့် မကိုက်ညီသည့်အခါ စိတ်ဖိစီးမှု အလွန်အမင်းဖြစ်ပေါ်ပြီး စိတ်ကျရောဂါ ဖြစ်စေနိုင်သည်။ ယနေ့ခေတ်တွင် ဘ၀တလျှောက်ပြိုင်ဆိုင်မှုများ ပိုမိုများပြားလာသကဲ့သို့ လူတစ်ဦးချင်းစီ၏ မျှော်လင့် ချက်နှင့် လက်တွေ့အကြားမှ ကွက်လပ်သည်လည်း ပို၍ ကျယ်ပြန့်လာသည်။ လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံတွင် ယဉ်ကျေးမှုပိုင်းဆိုင်ရာ အပြောင်းအလဲများစွာဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိသောကြောင့်လည်း နိုင်ငံသားများတွင် စိတ်ဖိစီးမှုများ ပိုမို၍ ဖြစ်လာမည်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ အပြောင်းအလဲများတွင် အရက်နှင့်ဆေးဝါးများကို အသုံးပြုမှုမြင့်တက်လာခြင်းနှင့် လူမှုစီးပွားရေးဆိုင်ရာ ပြဿနာများလည်း ပါဝင်မည်ဖြစ်သည်။
အဆိုပါ ပို၍ပို၍ဖြစ်ပွားလာသော စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးကိစ္စများကို ထိန်းချုပ်နိုင်ရန်အ တွက် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးစနစ်များနှင့် သက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍအတွင်းမှ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ် များကို အရေးတကြီးအဆင့်မြှင့်တင်ရန် လိုအပ်နေပြီဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျန်း မာရေးကဏ္ဍသည် အာဆီယံနိုင်ငံများနှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင်ပင် နိမ့်ကျနေသေးသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ စိတ် ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးစနစ်နှင့် ပတ်သက်၍ WHO ၏ ၂၀၀၇ ခုနှစ် အစီရင်ခံစာအရ စိတ်ရောဂါအ ထူးကုဆရာဝန် ၈၄ ဦးနှင့် လက်ရှိအလုပ်လုပ်နေသော စိတ်ပညာကျွမ်းကျင်သူ ၄ ဦးသာရှိသည်ဟု သိ ရသည်။ ထို့ကြောင့် ရန်ကုန်၊ မန္တလေးနှင့် နေပြည်တော်ကဲ့သို့သော မြို့ကြီးများမှလွဲလျှင် ကျန်မြို့ များတွင် စိတ်ရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်တစ်ဦးသို့မဟုတ် စိတ်ပညာကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦးကို ရှာဖွေရန် လွယ်ကူမည် မဟုတ်ပေ။ ရန်ကုန်စိတ်ရောဂါကုဆေးရုံကြီးသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် အကောင်းဆုံးရွေး ချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်နိုင်ပေသည်။ အခြားပြဿနာတစ်ခုမှာ မြန်မာနိုင်ငံမှ စိတ်ရောဂါအထူးကုများသည် လူ နာများအား ဆေးဝါးဖြင့်သာ ကုသနေကြခြင်းဖြစ်သည်။ အခြားနည်းလမ်းများဖြစ်ကြသည့် အားပေး ခြင်း၊ စိတ်ဓာတ်တက်ကြွစေခြင်း၊ ဆွေးနွေးပေးခြင်းနှင့် ဖြစ်စေသောအကြောင်းရင်းကို ရှာဖွေခြင်းတို့ မှာ အလှမ်းဝေးနေဆဲပင် ဖြစ်သည်။
သို့ရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံတွင် အခြားရွေးချယ်စရာ ကုသမှုနည်းလမ်းများလည်း ရှိနေသေးသည်။ တရားထိုင်ခြင်းသည် ယင်းတို့အနက် တစ်ခုပင်ဖြစ်သည်။ တရားထိုင်ခြင်းသည် စိတ်ဖိစီးမှုကို လျှော့ချ ပေးနိုင်ကြောင်း သိပ္ပံနည်းကျ သက်သေပြထားပြီးဖြစ်ရာ ယင်းကို ကုသမှုနည်းလမ်းတစ်ခုအဖြစ်လည်း သတ်မှတ်နိုင်ပြီး အကယ်၍ စိတ်ရှည်ရှည်နှင့် မှန်ကန်စွာပြုလုပ်ပါက ပျောက်ကင်းသည်အထိ ဖြစ်စေ နိုင်မည်လည်း ဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် တရားထိုင်ခြင်းကို စနစ်တကျသင်ယူနိုင်မည့် တရားစခန်း များ နိုင်ငံတ၀ှမ်းတွင် များစွာရှိနေသည်။ ယင်းကဲ့သို့သော အခြားကုသမှုနည်းလမ်းတစ်ခုကို ဈေး သက်သာလွယ်ကူစွာ ရရှိနေခြင်းကပင် မြန်မာနိုင်ငံသားများအတွက် ကံကောင်းမှုတစ်ခုဟု ဆိုရမည် ပင်ဖြစ်ပါသည်။
Posted in စိတ်ကျန်းမာရေး